Home Wararka Gaarigii Qaaday Ikraan Tahliil oo aay qabatay Kamerida CCTVga
[Daawo CCTV] Gaarigii Qaaday Ikraan Tahliil oo aay qabatay Kamerida CCTVga
MOL ayaa heshay muuqaalkii ugu danbeeyay ka hor inta aan la afduuban Ikraan Tahliil oo maqan tan you Bishii Juun 26, 10:03 Daqiiqo markaas oo aafafka hore Hotel Global aay ka raacday Gaari uu leeyahay Taliyaha NISA ee Gobolka Banaadir Yasin Farey sida aad ku arki doontaan muuqaalka CCTV.
Ikraan ayaa waxa aay ka tirsaneyd hay’adda NISA iyadoo xoghayn u noqotay Agaasimihii hore ee NISA Cabdullaahi Maxamed Sanbalooshe, kaddib markii xilka laga qaaday ayeey u wareegtay Gobolka Banaadir waxayna xoghayn u noqotay Gud. Yariisow oo lagu dhex dilay xarunta Gobolka Banaadir Bishii luulyo 24 2019.
Ikraan ayaa la rumeysan yahay in aay wax badan ka ogeyd dilkii Eng. Yariisow, waxaana warar kale oo dheeraad ah oo aay heshay MOL aay sheegayaan in aay guur ka diiday Cabdullaahi Kullane Jiis Mariixaan oo la rumeysan yahay in uu ka danbeeyay afduubka Ikraan Tahliil.
CCTV ayaa qabatay muuqaalka Ikraan oo raaceysa Gaari Toyoto Hilux ah oo MOL loo sheegay in uu leeyahay Taliyaha NISA ee Gobolka Banaadir Yasin Fareey. Waxaa MOL saraakiil ka tirsan hay’adaha amniga oo diiday in magacooda la sheego aay noo sheegeen in Yasin Farey iyo Jiis Mariixaan aay diideen in la baaro telefonka Ikiraan si loo ogaado qofkii ugu danbeeyay ee aay la hadasho iyo farrriimaha qoraalka aay isdhaafsadeen.
Shirkadda Hormuud ayaa ku xirtay hay’adda CID in aay warqad kala yimaadaan NISA si loogu daabaco xogta telefoobka Ikraan, balse waxay Booliiska MOL u sheegeen in NISA aay diiday in aay qorto warqadda.
Wixii ku soo kordha kiiskaan dib ayaaan idiinkala socodsiin doonaa